China 3D HIFU + THERMAGE Umkhiqizi kanye Umthengisi | Hondee
3D HIFU + THERMAGE
Inkambu kagesi electrode engxenyeni ekungaphelelini izicubu begazi kungashintshwa izigidi izikhathi ngaphakathi 1 yesibili RF ohlelweni. I izinhlayiya icala izicubu uyoveza okusheshayo ezinyakazayo Brownian naphezulu ngesivinini esifanayo ukwenza izicubu ukukhiqiza columnar basakaza ukushisa.
Ukwelashwa isikhundla hifu:
Ebunzini, amehlo, cheekbones, apula imisipha, izihlathi, kwesilevu nentamo ezifana nokuwohloka kwesikhumba ukuguga mkhuba.
Isici 3D HIFU 20000 isibhamu:
1. Quick & ukwelashwa esifushane: 30 MINS ukwelashwa umuntu ubuso
2. SMAS ukusikwa: collagen zilungiswe, fibre elastine ukusikwa
3. Akukho Ukuphumula: isikhumba nje abe osasitini emahoreni lokuqala eziningana ke isikhumba alulame.
4. Instant yi ngeke ihlolwe kusukela enyangeni yesibili kuya enyangeni eziyisishiyagalolunye, yi ezinhle izothatha iminyaka 2-3
5. Nhlobo non-koda
8 PC igobolondo ukukhetha, ukumisa ejwayelekile iyiphi 2pcs.
1.5 / 3.0 / 4.5mm uswidi ubuso
6,0 / 8,0 / 10,0 / 13,0 / 16.0mm uswidi ingalo, esifubeni, emuva, isisu izibunu, ethangeni, umlenze.
1. Isebenzisa ubuchwepheshe bamuva eziphambili ngokuthi HIFU, iDemo umfutho high igxile ultrasound.
2. It has zokusebenza amakhanda ezintathu ezahlukene ukuze ezindaweni ezahlukene zokusebenza:
-3.0mm iwukuba dermis ungqimba;
-4.5mm eyesikhungo SMAS ungqimba.
-6.0mm / 8mm / 10mm / 13mm / 16mm ngoba fat umzimba ungqimba
3. Kuba ngokuphelele non-koda futhi iphephile.
4. Umthelela uyoboniswa ngemuva kokuhlinzwa, kuyilapho umphumela engcono izobonwa emva kwezinyanga ezimbili. Singasho eyathatha iminyaka 2-3.
Theory Ukwethulwa Fractional RF
Inkambu kagesi electrode engxenyeni ekungaphelelini izicubu begazi kungashintshwa izigidi izikhathi ngaphakathi 1 yesibili RF ohlelweni. I izinhlayiya icala izicubu uyoveza okusheshayo ezinyakazayo Brownian naphezulu ngesivinini esifanayo ukwenza izicubu ukukhiqiza columnar basakaza ukushisa. Isakhiwo collagen hydrogen bazakuchithwa, ngaleyo ndlela ekushintsheni kathathu Helix isakhiwo amangqamuzana i-collagen, okuholela ukusikwa ngokushesha kwe-molecule collagen, ukuze sifinyelele ngokushesha imiphumela yokwelapha kokuqina; isimiso sokujikeleza kwegazi uzobangela okuncane noma okusesilinganisweni ukushisa ukulimala dermis izicubu, izigaba ezintathu (isigaba ukuvuvukala, isigaba-value-added futhi reshaping isigaba) efana isilonda ukuphulukisa kuzokwenzeka, ukuze uthuthukise ukuma dermis reshaping, ngaleyo ndlela uthole the isikhumba ekwakhiweni kanye fiphaza ngenkathi ngempumelelo kokukhipha imibimbi nokulinganisela ezinzima, futhi le miphumela zigcinwe.
Fractional RF imiphumela
umbimbi 1.Remove futhi isikhumba rejuvenation
2.Freckle ukususwa / mhlophe Management
3.Fade induna kanye induna izibazi.
4. Ukubuyisela kuyaqina isikhumba
5.Improve ukuthungwa isikhumba
6.Solve izinkinga iso.
15 intshi umbala Isikrini
Ubuso: 1.5mm: 3.0mm, 4.5mm
Umzimba: 6mm, 8mm 10mm, 13mm, 16mm
Standard: 1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 8.0mm, 13.0mm
0.2J-2.0J (ashintshekayo: 0.1J / isinyathelo)
1.0-10mm (ashintshekayo: 0.5mm / isinyathelo)
Previous: factory customized Ultrasound Cavitation Massager - HDHFM009- 3D HIFU-silver – Hondee
Okulandelayo: 3D 2IN1 HIFU + sowesifazane sangasese
Ugxilile ultrasound , Derma Wand Izinwele Emzimbeni Machine Nobuhle Izinsiza kusebenza , Liposonix Ukuze umzimba ekwakheni , ebusweni Nobuhle Izinsiza kusebenza , Double Chin Removal, Hair Removal Device Home Use,